Muxuu Tomedes ku bartay 15 sano oo Turjumaadda Daraasadda Dibadda ah 2022
Muxuu Tomedes ka bartay 15 Sano oo Turjumaadda Daraasadda Dibadda ah
Waxaa laga yaabaa 17, 2022 SAN
Sannadkii 2019 waxaa jiray in ka badan 6 milyan oo arday caalami ah. Taasi waxay ku tusinaysaa uun inay jiraan dad badan oo adduunka ah oo raba inay wax ka bartaan dalal kale. Ma ka mid tahay kuwa raba in ay dibadda wax ku bartaan? Ma waxaad isha ku haysaa a Deeq waxbarasho oo Yurub ah? Ka waran mid Australian ah?
Mid ka mid ah dhinacyada muhiimka ah ee waxbarashada dibadda waa tarjumaada dukumentiga. Haddii aad wax ku baranayso waddan leh luqad rasmi ah oo ka duwan waddankaagii hooyo, markaas waxaad u baahan doontaa adeegyada turjumaadda dukumeentiga.
Maqaalkani waxa uu dhex mari doonaa casharadii ay bartay Tomedes, oo ah shirkad bixisa adeegyada tarjumaada dukumentiga 15kii sano ee la soo dhaafay. Casharadaasi waxay caawin karaan tarjumayaasha iyo ardayda si isku mid ah.
Sanadaha Hore ee Dukumentiyada Turjumaada ee Tomedes
Sida Loo Galo Jaamacadda Riyadaada Adigoo Turjumaaya Dukumentiyadaada
Diyaarso Dukumentiyada Asalka ah
Hel turjumaado shahaadaysan
Si xad dhaaf ah ugu diyaargarow shuruudahaaga
Turjumaada ha eego haddi ay suurtagal tahay
Diiwaangeli baahidaada waxbarasho ee dibadda
Diiwaanada Tacliinta Rasmiga ah
Warqada Talo soo jeedinta
Tomedes waxaa la aasaasay 2007 gudaha Israa'iil. Ma aysan qaadan waqti dheer ka hor inta aysan shirkadu helin mashaariicda tarjumaada dukumentiyada ardayda ajnabiga ah. Markii baahida loo qabo adeegyada turjumaada dukumentiga ay kordheen, shirkaddu waxay baratay dhowr hab-dhaqannada ugu wanaagsan, gaar ahaan tarjumidda shuruudaha ardayda caalamiga ah.
Mid ka mid ah barashada muhiimka ah inta lagu jiro muddadan ayaa ah in tarjumayaashu ay ka yimaadaan halka dukumeentiyada asalka ah ay ka yimaadeen. Taas macnaheedu waa inay og yihiin sida dukumentiyadaas loo soo saaro oo loogu isticmaalo goobta deegaanka. Taasi waa hal tusaale oo ka mid ah waxbarashada uu Tomedes wadaagi karo. Shirkaddu waxay kaloo baratay dhowr waxyaalood oo ka caawin kara ardaydu inay galaan iskuullada ay ku riyoonayaan dibadda.
Haddii aad ku riyoonayso inaad gasho jaamacad shisheeye, waa inaad diyaar u ahaataa dhammaan dukumeentigaaga. Dugsiyadaasi aad bay u adag yihiin marka ay timaado habaynta codsadeyaasha. Markaad ogaato inaad u baahan tahay in dukumeentigaaga latarjumo markaa waxaad u baahan tahay inaad si xirfad leh u sameyso.
Waa kuwan waxyaabo kale oo Tomedes uu bartay markii uu bixinayey adeegyada tarjumaada dukumeentiga.
Dhawr jeer ayay dhacday in arday codsade ah loo turjumo dukumeenti laakiin waxa uu soo bandhigi karaa oo kaliya sawir libdhay oo dukumeenti ah. Mararka qaarkood, aad bay u adag tahay in la akhriyo waxa ku qoran nuqulka oo ay ku adag tahay tarjumayaashu inay ogaadaan waxa ku qoran.
Iyadoo wakaalada turjumaada ay isku dayi karto in ay turjunto waxa ku qoran koobi, dugsiyada iyo safaaradaha ayaa codsiga u baahan doona asalka dukumeentiyada. Markaa, haddii dukumentiyada lagu turjumayo, hubi inaad sidoo kale heli karto asalka, si aanu dadaalkaagu u khasaarin.
Mararka qaarkood, kuma filna in dukumentiyadaada la turjumo. Waxaa jira kiisas marka dukumentiyada loo baahan doono in la helo turjumado shahaadeysan.
Turjumaada la shahaadiyay waa tarjumaado haysta shahaadooyin turjumaanadu oo sheegaya in turjumaada ay run tahay oo sax tahay inta aqoontooda iyo kartidooda ah. Waa dammaanad in waxa ku qoran nooca la turjumay uu la mid yahay dukumeentiga asalka ah.
Wadamada qaarkood, turjumaada shahaadaysan waa shardi. Kanada tusaale ahaan, codsiyada socdaalka iyo qaxootigu waxay u baahan yihiin in dhammaan dukumeenti aan ku qornayn Ingiriisi ama Faransiis ay lahaadaan tarjumaad shahaadaysan. Haddii tarjumaad shahaadeysan aysan jirin, markaas waa in dhaarta la bixiyaa. Isla sidaas oo kale ayaa khuseeya haddii aad rabto Waxbarashada Kanada maanta.
Sanadihii uu Tomedes bixinayey adeegyada turjumaada dukumeentiga, waxaa jiray dhawr xaaladood oo macaamiisheeda ay ku guuldaraysteen inay galaan dugsiga sababtoo ah ma haystaan ​​dhammaan shuruudaha.
Casharka halkan waa in kaliya la isku diyaariyo. Marka ay timaado dukumentiyada dugsigaaga, soo ururi dhammaan waraaqaha khuseeya diiwaankaaga waxbarasho. Xataa kuwa aan ku jirin liiska shuruudaha, kaliya diyaari.
Waxa jira hal macmiil oo ka tirsan wakaaladda tarjumaadda oo ka faa'iidaystay adeegyadooda tarjumaada dukumeentiga ka dib markii ay la kulmeen dhibaato. Qofka ayaa codsanayay inuu arday ka noqdo jaamacad ku taal Ingiriiska. Wuxuu saaxiibkii ka codsaday inuu u turjumo diiwaankiisa tacliimeed. Ka hor inta uusan gudbin dukumentiyada qof baa hubiyay tarjumaada oo ogaaday inay si weyn u khaldan tahay.
Taasi waxay ahayd markii uu u soo jeestay Tomedes adeegyadooda tarjumaada dukumentiga. Faa'iidada helitaanka adeegga wakaalad weyn oo tarjumaad waa inaad helayso nooc ka mid ah hubinta tayada isku mar. Waxaa jira hab lagu xakameynayo tayada si loo hubiyo saxnaanta tarjumaada.
Iyada oo ku saleysan la shaqeynta codsade arday badan, Tomedes wuxuu hayaa liiska dukumeentiyada ugu muhiimsan ee loo baahan yahay si loo bilaabo safarka waxbarasho ee dibedda.
Midkani wuxuu ka iman doonaa dugsiga laftiisa. Waxaad u baahan doontaa inaad ku qorto macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo kan xirfadda foomka si ay maamulayaasha dugsigu awood ugu yeeshaan inay dib u eegaan macluumaadka.
Hubi inaad akhriday foomka ka hor intaadan buuxin oo qor macluumaadka loo baahan yahay. Faahfaahin kasta oo foomka ku taal waa inay noqotaa mid sax ah oo waa inaanay ka hor imanayn macluumaadka dukumeentigaaga kale.
The Ujeedada ujeedada ama SOP waa qayb aad muhiim u ah codsiga. Dukumeentigan, waxaad ku sheegaysaa sababta aad u rabto inaad wax ka barato dugsiga aad codsanayso. Waxa kale oo aad ka hadli kartaa guulahaaga xirfadeed iyo tacliineed iyo sida aad u rabto inaad ku sii wadato kuwa dugsiga cusub.
Waa suurtogal in SOP kaaga lootarjumo qayb ka mid ah adeegyada turjumaada dukumeentiga.
Qoraalada akadeemiyada rasmiga ah waxay ka koobnaan doonaan buundooyinkaaga iyo buundooyinkaaga. Qaabka qoraallada akadeemiyadda aad ayey u kala duwanaan karaan oo haddii ay ku qoran yihiin luqad aan ahayn luqadda rasmiga ah ee waddanka aad rabto inaad wax ka barato, waxaa laga yaabaa inaad u baahato in lagu turjumay.
Si kor loogu qaado codsigaaga, waa inaad heshaa dhawr xaraf oo talo bixin ah. Fikrad ahaan, waa inaad ka heshaa talooyinkan macalimiinta dugsigaaga.
Kuwani waa qaar ka mid ah waxyaalihii ay barteen dadka ka dambeeya Tomedes 15kii sano ee bixinta adeegyada tarjumaada dukumentiga. Waxaan rajeyneynaa, fikradahan inay u anfacayaan kuwa raba inay dibadda wax ku bartaan.
Sp Post Barashada Hagaha Dibadda
Previous Post:11-ka Koorso Rinjiyeynta Intarneedka ee Bilaashka ah ee ugu Fiican
Post Next:9ka Dugsi ee Cunnada ugu Fiican ee Arizona | Qiimaha iyo Faahfaahinta